Imibandela - World Tourism Portal
Imibandela yokusebenzisa World Tourism Portal
Lezi Zimo zilawula ukusetshenziswa kwakho kwe World Tourism Portal iwebhusayithi (“Iwebhusayithi”). Uyacelwa ukuthi ufunde lezi Zimo ngokucophelela njengoba zithinta amalungelo akho nezikweletu zakho ngaphansi komthetho. Uma ungavumelani nale mibandela, uyacelwa ukuthi ungasebenzisi Iwebhusayithi.
I-1.1 Ngokusebenzisa Iwebhusayithi uyavuma ukuboshwa yile mibandela.
I-1.2 Sikunikeza ilayisense elilinganiselwe lokufinyelela nokusebenzisa wena uqobo Iwebhusayithi. Ngokwenza lokhu ungaphrinta ikhophi elilodwa lokuqukethwe Iwebhusayithi okuthandayo.
I-1.3 Ngokusebenzisa kwakho Iwebhusayithi awusoze wenze okulandelayo ngeWebhusayithi noma okuqukethwe kwayo:
I-1.3.1. ngaphandle kwenhloso yokuthola ukungena kwiwebhusayithi, landa ngendlela ye-elekthronikhi ku-disk noma kunoma iyiphi iseva noma enye into yokugcina, noma ngabe ixhunyiwe kwinethiwekhi;
Ukusabalalisa kwe-1.3.2 ukusabalalisa, ukudlulisa, ukubonisa, ukwenza, ukukhiqiza kabusha (ngaphandle kwezimo ezikhawulelwe ezivunyelwe isigaba 1.2 ngenhla) noma ukushicilela kunoma yiluphi uhlobo noma ifomethi kufaka, ngaphandle komkhawulo, kunoma iyiphi i-blog yomuntu siqu noma iwebhusayithi yokuxhumana nomphakathi (kepha akukho lutho kule ndima 1.3.2 ihloselwe ukukuvimbela ekuphawuleni ngeWebhusayithi noma okuqukethwe kwayo nganoma iyiphi indlela noma ifomethi);
I-1.3.3 idala noma yimuphi umsebenzi osuswayo.
I-1.4 Awungeke uphinde uthengise, udlulise noma usebenzise noma ikuphi okuqukethwe kweWebhusayithi ngezinjongo zokuhweba.
I-1.5 Awungeke usebenzise iWebhusayithi nganoma iyiphi injongo elandelayo: -
Ukusabalalisa i-1.5.1 ukusabalalisa noma yimuphi umthetho okungekho emthethweni, ukuhlukunyezwa, ukukhulula, ukuhlukumeza, ukusongela, ukulimaza, inhlamba, amanyala, noma ezinye izinto eziphikisayo noma ukweqa eminye imithetho;
Ukuhambisa i-1.5.2 okhuthaza ukusebenza okubandakanya ubugebengu, noma okwephula noma yimiphi imithetho efanele, izimiso noma ikhodi yokusebenza noma kuphi;
I-1.5.3 iphazamisa ukusetshenziswa komunye umuntu noma ukujabulela i-Website;
Ukwenza i-1.5.4 ukwenza, ukudlulisa noma ukugcina amakhophi e-elekhtronikhi wezinto ezivikelwe yi-copyright ngaphandle kwemvume yomnikazi.
I-1.6 Sikunikeza ilungelo elibuyiselekayo, elingakhethiyo, elinomkhawulo lokwenza i-hyperlink kwiwebhusayithi inqobo nje uma isixhumanisi singasivezi, abasebenzisana nathi, abakhangisi bethu, abaxhasi bethu noma noma yini, noma imikhiqizo yabo noma imisebenzi yabo. indlela yamanga, edelelayo, edukisayo noma enyantisayo. Awungeke usebenzise noma yimaphi ama-logo wethu, uphawu lokuthengisa noma ezinye izimpawu zokuphathelene noma ihluzo njengengxenye yesixhumanisi ngaphandle kwemvume ebhaliwe ebhaliwe.
I-2.1 Ukusebenzisa kwakho Iwebhusayithi kungaphansi kwethu Inqubomgomo yobumfihlo, okungatholakala ngokuchofoza kusixhumanisi. Sicela ufunde ngokucophelela.
Ukutholakala nokuqukethwe kweWebhusayithi
I-3.1 Noma sihlose ukukunikeza insizakalo engcono kakhulu ngokusebenzisa kwakho Iwebhusayithi, asethembisi ukuthi ukutholakala kweWebhusayithi ngeke kuphazamiseke futhi nokudluliswa ngeke kube namaphutha.
I-3.2 Ukufinyelela kwakho kwiwebhusayithi kungavunyelwa ngezikhathi ezithile ukuthi kuvunyelwe ukulungiswa, ukugcinwa, ukuguqulwa noma ukufakwa kwezikhungo ezintsha noma izinsiza. Sizozama ukubuyisela insiza ngokushesha okusemandleni ethu.
I-3.3 Sizama futhi siqinisekise ukuthi okuqukethwe yiWebhusayithi kunembile futhi / noma ukuphawula noma umbono kulungile futhi kunengqondo kepha asethembisi ukuthi lokhu kuzohlala kunjalo futhi asethembisi ukuthi imininingwane oyithola ngokusebenzisa Iwebhusayithi izoba yikhwalithi egculisayo noma efanele noma efanelekile noma iyiphi injongo ethile.
I-3.4 Uma kwenzeka iphutha ngokufinyelela kwakho noma ngokusebenzisa i-Webhusayithi, noma uma ubona ukuthi i-Website iqukethe noma yikuphi ukunemba, sicela usibikele ngokusebenzisa isixhumanisi sempendulo kuWebhusayithi futhi sizobheka leyo ndaba ngokushesha esingakwazi. .
Amawebhusayithi wesithathu, imikhiqizo nezinsizakalo
I-4.1 Njenge lula kuwe, Iwebhusayithi ifaka izixhumanisi kumawebhusayithi abantu besithathu. Asazihlole noma sihlole amawebhusayithi esithathu noma yiziphi izimpahla noma izinsizakalo ezithengiswayo kuzo. Asikukhuthazi okuqukethwe kumawebhusayithi wesithathu noma yiziphi izimpahla noma izinsizakalo ezithengiswayo kuzo. Usebenzisa amawebhusayithi wesithathu ngengozi yakho. Kufanele ubuyekeze ngokucophelela yonke imigomo nemibandela, kufaka nenqubomgomo yobumfihlo, yanoma yimuphi umuntu wesithathu owusebenzisa ngeWebhusayithi.
I-4.2 Asinasibopho noma isikweletu kunoma yimuphi umncintiswano ohlelwe umuntu wesithathu owungenayo ngeWebhusayithi. Ukungena kwakho kuzoba ngaphansi kwemigomo nemibandela, kufaka phakathi inqubomgomo yobumfihlo, yomuntu wesithathu neqembu lesithathu kuzoba ngumthwalo wemfanelo kuyo yonke imibuzo evela kumncintiswano nokugcwaliswa kwanoma imuphi umklomelo noma omunye umvuzo.
Ingxenye ye-4.3 yeWebhusayithi ingaqukatha ukukhangisa noma ukuxhaswa ngabantu besithathu abanesibopho sokuqinisekisa ukuthi impahla efakwe kwiWebhusayithi inembile, iphelele, iyiqiniso futhi ayidukisi futhi ihambisana nayo yonke imithetho efanele namakhodi. Ngeke sibe nesibopho kuwe uma lokho okuvela eceleni kungalungile, akuphelele, akulona iqiniso, kudukisa noma kungahambisani nemithetho namakhodi afanele.
I-4.4 Asinamandla okulawula, futhi asizibophezele, okuqukethwe, izinqubomgomo zobumfihlo, noma ukwenza kwanoma yiluphi iwebhusayithi amawebhusayithi noma izinsiza. Uyakuvuma futhi ukuvuma lokho World Tourism Portal ngeke ibe nesibopho noma isibopho, ngokuqondile noma ngokungaqondile, nganoma yikuphi ukulimala noma ukulahleka okubangelwe noma okusolwa ukuthi kudalwe noma kuhlobene nokusetshenziswa noma kokuncika kunoma yikuphi okuqukethwe okunjalo, izimpahla noma izinsizakalo ezitholakala kunoma yiliphi lawo mawebhusayithi noma izinsiza.
I-4.5 Siyi-Associated ye-Amazon futhi ngenxa yalokho, singathola imali yekhomishini kusukela ekuthengeni okufanelekile. Yazi ukuthi asihlobene nganoma iyiphi indlela nemikhiqizo ebhalwe kuwebhusayithi ye-Amazon futhi ayinakubekwa icala kunoma yiluphi udaba olungavela ekusebenziseni kwakho isiza sabo kanye nokuthengwa kwemikhiqizo ethile. Ngokuqhubeka nokusebenzisa izinsizakalo zabo ngokusebenzisa isayithi lethu uyavuma ngalesi simo. Ngeminye imininingwane sicela ufunde Isaziso senqubomgomo sase-Amazon & Izimo Zokusetshenziswa kwe-Amazon.
I-5.1 Konke okuqukethwe kwiWebhusayithi (kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, noma yiliphi igama, ilogo, uphawu lokuhweba, isithombe, ifomu, ukwakheka kwekhasi noma umbhalo) kuyimpahla yethu noma, ezimweni ezifanele, impahla yomuntu wesithathu omkhangiso wakhe, uxhaso, iwebhusayithi , izinsizakalo noma izimpahla kubhekiselwa kuzo, noma zitholakala ngeWebhusayithi.
I-5.2 Singabanikazi abakhethekile bayo yonke i-software esetshenziswe kwiWebhusayithi kanye nabanikazi abakhethekile bokuhlanganiswa kwakho konke okuqukethwe kuWebhusayithi.
I-5.3 Gcina njengoba kuvunyelwe ngaphansi kwale mibandela, awukwazi ukukhipha (noma ngenye indlela ukusebenzisa) okuphelele noma iyiphi ingxenye yokuqukethwe Iwebhusayithi (kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, noma yiliphi igama, ilogo, uphawu lokuhweba, isithombe, ifomu, ikhasi isakhiwo noma umbhalo) ngaphandle kwemvume ebhaliwe ebhaliwe.
Izimo ezakha ingxenye yalezi Zimo Zokusetshenziswa kanye Nezimo Zokuthengisa Kwezimpahla. Ezigabeni ezingezansi, igama elithi “Imibandela” lisebenza kuzo zombili Izimo Zokusetshenziswa kanye Nezimo Zokuthengisa Izimpahla.
I-6.1 Uma sephula Imibandela, sizobhekana nanoma yikuphi ukulahleka okuhlupheka ngenxa yokuthi bangumphumela obonakalayo obonakalayo kithi sobabili ngesikhathi usebenzisa Iwebhusayithi, noma isivumelwano sesivumelwano ukuthengiswa kwempahla ngathi kithi kwenziwa. Kunoma ikuphi, isikweletu sethu ngeke size sifinyelele noma sifake ukulahleka kwebhizinisi (kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, ukulahleka kwezivumelwano, imali engenayo, inzuzo, ukulindeleka okulindelekile, izindleko ezingadingekile, ukuzwelana okuhle noma idatha) noma okunye ukulahleka okubalulekile noma okungaqondile okwabonakala kwangaphambili sobabili lapho uqala ukusebenzisa iWebhusayithi noma lapho kwenziwa isivumelwano sokuthengisa izimpahla kithi.
I-6.2 Akukho lutho ezimeni olukhawula isikweletu sethu sokufa noma ukulimala komuntu okubangelwa ukunganaki kwethu noma ukwephula umsebenzi noma okubangelwa ukungaziphathi kwethu ngamabomu noma ukunganaki okukhulu.
I-6.3 Uzoba nesibopho kithi ngokulahlekelwa kwethu nezindleko ezivela ukwephula kwakho Imibandela.
Ukusetshenziswa kwamanye amazwe
I-7.1 Asithembisi ukuthi izinto ezisetshenziswayo kwiwebhusayithi zilungile noma zitholakala ukuthi zisetshenziswe, futhi ukufinyelela i-Website kusuka kumasimu lapho okuqukethwe kuwo kungavumelekile noma kungekho emthethweni. Uma ukhetha ukufinyelela Iwebhusayithi kusuka ezindaweni ezingaphandle kwe-European Union, wenza kanjalo, ngokwakho futhi unesibopho sokulandela imithetho yendawo.
Imicimbi engaphezu kolawulo lwethu olunengqondo
I-8.1 Ngeke sibe nesibopho sanoma yikuphi ukubambezeleka noma ukwehluleka ukulandela izibopho zethu ngaphansi Kwezimibandela uma ukubambezeleka noma ukwehluleka kubangelwa yizimo ezingaphezu kwamandla ethu. Lokhu akuthinti amalungelo akho asemthethweni.
I-9.1 Amalungelo akho nezibopho zakho ezingaphansi kweMibandela zingezomuntu siqu futhi awukwazi ukwabela noma ukuhambisa amalungelo anjalo nezibopho kumuntu wesithathu. Akekho umuntu wesithathu okufanele umhambise noma umdlulise amalungelo akho nezibopho zakho ozoba namalungelo wokuphikisana nathi.
I-10.1 Uma wephula Imibandela, futhi sikhetha ukungakunaki ukwephula umthetho, sisazoba nelungelo lokusebenzisa amalungelo ethu namakhambi kunoma yisiphi esinye isimo lapho wephula Imibandela.
I-11.1 Uma noma yisiphi salezi Zimo sikhishwa singenamsebenzi, singasebenzi noma ngasiphi esinye isizathu esingenakusebenza, leso simo sizodalulwa futhi ngeke sithinte ubuqiniso kanye nokusebenza kwezimo ezisele.
I-12.1 Sinelungelo lokwenza izinguquko kwiWebhusayithi, Izimo kanye nazo zonke ezinye izimo nezinqubomgomo okukhulunywa ngazo Ezimweni noma ezisebenzisa Imibandela ngokuphelele noma ngokwengxenye. Lokhu kusho ukuthi Iwebhusayithi, Izimo, Izinqubomgomo kanye nezinye izimo kungenzeka zishintshile kusukela wasebenzisa i-Webhusayithi wakho wokugcina. Ukusetshenziswa kwakho kweWebhusayithi kuzokhonjelwa Imibandela, izinqubomgomo kanye nezinye izimo ezisebenza ngaleso sikhathi usebenzisa Iwebhusayithi. Uma ungazemukeli lezi zinguquko, akufanele uqhubeke nokusebenzisa Iwebhusayithi.
Umthetho osebenzayo namandla
I-13.1 Izimo zizolawulwa yimithetho yaseCyprus futhi izinkantolo zaseCyprus zizoba namandla okukhethekile kunoma iyiphi impikiswano evela ngaphansi kweMibandela.
I-13.2 Ngokuqhubeka nokufinyelela noma ukusebenzisa insizakalo yethu ngemuva kokuthi lezo zibuyekezo zisebenze, uyavuma ukuboshwa yimigomo ebukeziwe. Uma ungavumelani nemigomo emisha, sicela uyeke ukusebenzisa Insiza.
Ukusebenzisa kwakho isevisi kuyingozi yakho kuphela. Isevisi inikezwa nge "AS IS" futhi "NJENGOBA iyatholakala" ngesisekelo. Isevisi inikezwa ngaphandle kwemigomo yanoma yiluphi uhlobo, kungakhathaliseki ukuthi ukuveza noma ukuphawula, kufaka phakathi, kodwa kungagciniwe, kuqinisekisiwe ngemibandela yokuthengisa, ukufaneleka komgomo othile, ukungaphumeleli noma inkambo yokusebenza.